Maxey tahay sababta uu Christiano Ronaldo u xerto funaanadda nambarka 7-aad ? - Celebrity News - Jilaa News - Falanqeynta Fanka iyo Fanaanka
Cayaaryahanka kooxda Real Madrid ee kasoo jeeda reer Poortaqiis ee Christiano Ronaldo ayaa shaaca ka qaaday sababta keentay inuu goor walba xerto funaanada numberka 7-aad oo uu caanka ku noqday , asigoo sheegay in ay tahay mid uu hibo u siiyay macalinkiisii Sir Alex Forguson ee Tababari jiray Ronaldo xiliguu kubadda magaca ku yeelanayay ee taasoo uu sheegay in ay u noqotay nasiib.
Ronaldo ayaa xusay Sir Alex Forguson inuu ku yiri maalintii uu qaadanayay numberka 7-aad , xero waad ku nuureysaa waadna u qalantaa oo laacib dunida ka yaabsada ayaa noqon doontaa maalin uun. Taasoo noqotay riyo rumowday ayuu yiri.
Ronaldo aya kubadda dahabka ee laacibnimada aduunka sanadka Ballon De,oro qaatay marki u horeysay sanadkii 2009 asigoo la joogay Manchester United isagoo naadigaas abaal weyn u haaya haatan . Waxaana sidoo kale uu afar jeer hantay kubadaas dahabka markii uu usoo wareegay naadiga Real Madrid oo uu haatan u cayaaro una yahay xiddig.
©2017 Jilaa News, All Rights Reserved.